ဧရာဝတီစာကြည့်တိုက်: ပီတိမင်းသားနှင့် ပျံလွှားငယ်(၂)
“ ဟို. . . အဝေးကြီးမှာ . . ” ပီတိမင်းသားက ဂီတလိုသာယာတဲ့ အသံတိုးတိုးနဲ့ဆက်ပြောပါတယ်။ “ ဟိုး. . အဝေးကြီးက လမ်းကြားကလေး တစ်ခုမှာ ဆင်းရဲသူမတစ်ယောက်ရဲ့ အိမ်တစ်အိမ်ရှိတယ် ။ အိမ်ရဲ့ပြတင်း ပေါက် တစ်ခုကိုကျော်ဖြတ်ပြီးတော့ စားပွဲမှာ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ထိုင်နေတာ ကို ငါတွေ့ရတယ် . . သူမရဲ့မျက်နှာက ပိန်လှီခြောက်တွန့်ြီ့း သောက လှိုင်းတွေထနေပါတယ် . . . သူမရဲ့လက်ဖ၀ါးတွေက ကြမ်းတမ်း လို့ပဲ. . ပြီးတော့ အပ်ထိုးထားမိတဲံ ဒဏ်ရာတွေမှာ သွေးခြေတွေဥနေလို့ တျာတျာနီနေတယ်. . သူမက အပ်ချုပ်သည်လေ. . . မကြာခင် ဘုရင်မရဲ့ အလှဆုံး အပျိုရံတောလကလေး ၀တ်ဖို့အတွက် ၀တ်ရုံရှည်ပေါ်မှာ မေတ္တာပန်းကလေးတွေကို ထိုးသီပေးနေတာလေ. . ၀တ်ရုံကိုလာမယ့် ကပွဲကြီးမှာ ၀တ်ဆင်ရမှာမို့ အပ်ချုပ်သူမ က မနားတမ်း ချုပ်နေရတာ…… ”
“ အခန်းထောင့်မှာ ရှိတဲ့ ဟောင်းနွမ်းစုတ်ပြတ်နေတဲ့အိပ်ရာ ထက်မှာတေ့ာ သူမရဲ့ သားလေး လျောင်းအိပ်နေပါတယ်. . ဖျားပြီး ကိုယ်ပူနေရှာတယ်. . ဆာလွန်းလို့လဲ တတွတ်တွတ်ငိုနေရှာတယ် . . သူ့မိခင် ကသူ့ကို တိုက်ကျွေးဖို့ နို့ရည်လည်းမရှိဘူး. . . ဆေးလည်းမရှိဘူး . . မြစ်ရေကိုပဲ တိုက်ပေးထားရတယ်လေ. . ပျံလွှားငှက်ငယ်ရယ် င့ါဓားရှည်လက်ကိုင်က ပတ္တမြားကို ဖြုတ်ယူပြီး ကလေးမိခင်ကို သွားပေးပါလားကွယ်…”
ငှက်ငယ်လေးက“ အရှင်မင်းသား . . ကျွန်တော့အဖော်တွေက အီဂျစ်နိုင်ငံမှာ စောင့်နေကြတယ်. . မနက်ဖြန်ခါကျရင် သူတို့တတွေ နိုင်းလ် မြစ်ဝှမ်းအတိုင်း ပျံသန်းပြီး ကြာပန်းတွေနဲ့ စကားပြောကြလိမ့်မယ်.. ကျွန်တော်လည်း သူတို့နဲ့အတူလိုက်ပါချင်ပါတယ်. . . ” လို့ပြောတာပေါ..
မင်းသားလေး က “ပျံလွှားငှက်ငယ်. . ငါ့ထံပါးမှာ တစ်ညတာခိုနားပြီး ငါ့ရဲ့ စေတမန်လုပ်ပေးပါလာကွယ်. . . ” လို့ပြောတော့ မင်းသားရဲ့ မျက်နှာက အလွန်ညှိုးငှယ်နေတဲ့အတွက် ပျံလွှားငှက်ငယ် က စိတ်မကောင်းဖြစ် မိတယ်… ငှက်ငယ်လေး က “ ‘ဒီနေရာကသိပ်ချမ်းပါတယ် ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် တစ်ညတာ ဒီမှာနေပြီးတော့ အရှင်မင်းသားရဲ့ စေတမန် အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးပါ့မယ် လို့”. ပြောလိုက်ပါတယ်.. မင်းသားလေးက “ ကျေးဇူးပဲ ပျံလွှားငှက်ငယ်ရယ်. . ကျေးဇူးပဲ. . .”
ပျံလွှားငှက်ငယ်ဟာ မင်းသားရဲ့ ဓားရှည်လက်ကိုင်ပေါ်က ပတ္တမြားလုံးကြီးကို ဆွဲနုတ်ပြီး သူ့နှုတ်သီးမှာ ကိုက်ချီပြီးတော့ မြို့ပေါ်က ပျံသန်းသွားပါတယ်… အ်ိမ်ခေါင်မိုးတွေကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဖြတ်ကျော်ပြီးတဲ့ အခါ မြို့ တစ်ဖက်စွန်းက ဆင်းရဲသူမရဲ့ အိမ်သို့ရောက်လာပါတယ်. . ဆင်းရဲသူမ က စားပွဲပေါ်မှာ အိပ်ပျော်နေရှာပါတယ်… ဒါနဲ့ငှက်ငယ်က ပတ္တမြားလုံးကြီးကို စားပွဲပေါ်က အပ်ချည်လုံးတွေဘေးမျာ ချထားပေး လိုက်တယ် အဲသည်နောက် သားငယ်ကို ပျံလွှားငှက်ငယ်ကြည့်လိုက်တော့ သားငယ်ကမအိပ်နိုင်ပဲ လူးလှိမ့်နေ တာကို တွေ့ရတယ်.. . ဒါကြောင့်သူ့တောင်ပံလေးတွေနဲ့ ယပ်တောင်သဖွယ် ခပ်ပေးသတဲ့ . .
“အင်း . မေမေ ယပ်ခပ်ပေးလို့ အေးနေတာပဲ” . . သားငယ်က အဲလိုယူဆပြီး နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်သွားတော့တယ်.. . မိုးလင်းတော့ ပျံလွှားငှက်ငယ်က မြစ်ဆီသို့ ပျံသွားပြီးရေချိုးတယ်.. . “ကနေ့ညတော့ ငါအီဂျစ်ကို အရောက်သွားတော့မယ်” လို့ မြူးပျော်နေပါတယ်.. . .
ဖြူစင်၍ ကြင်နာတတ်သော နှလုံးသားပိုင်ရှင်
စန္ဒာလမင်းထွန်းလင်းလာတဲ့အခါမှာတေ့. ပီတိမင်းသားဆီပျံသွားပြီး . “ အရှင်မင်းသား အီဂျစ်နိုင်ငံကို မှာစရာ ကိစ္စများရှိပါသလား . . ကျွန်တော့ အခု ခရီးစထွက်ပါတော့မယ်... “ပျံလွှားငှက်ငှက်ရယ် ငါ့ထံပါးမှာ တစ်ညလောက် ထပ်မနေနိုင်ဘူးလားကွယ်…”
“ကျွန်တော့ အဖော်တွေက အီဂျစ်နိုင်ငံမှာ စောင့်နေကြပါတယ်.. မနက်ဖြန်ကျရင် နိုင်းလ်မြစ်ဝှမ်းဘေးက လယ်ခင်းတွေမှာ စပါးနှံတွေကို တပျော်တပါး ကောက်စားကြလိမ့်မယ် ”
“ပျံလွှားငှက်ငယ်ရယ် . ဟိုးမြို့တစ်ဘက်စွန်းနားက အိမ်တစ်ဆောင်ရဲ့ အမိုးအောက်မှာ အခန်းကျဉ်းထဲမှာ လူငယ်တစ်ယောက်ကို ငါတွေ့ရတယ်…သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေက ကျယ်ဝန်းပြီးစိတ်ကူးစိတ်သန်းများနဲ့ ရီဝေနေကြ တယ်. သူက ပြဇာတ်တစ်ပုဒ်ရေးနေတာကွယ့်. . ပြဇာတ်က အဆုံးမသတ်ရသေးဘူး သူသိပ်အေးလွန်းလို့ ဆက်မရေးနိုင်ဘဲ ခိုက်ခိုက် တုန်နေရှာပါတယ်… ”
ဖြူစင်ပြိး ကြင်နာတတ်တဲ့ပျံလွှားငှက်ငယ်လေးက သနားစိတ်ဝင်လာပြီး “ကောင်းပါပြီ အရှင်မင်းသား၊ အရှင်မင်းသားရဲ့ စေတမန်အဖြစ် ကျွန်တေ်ာတစ်ညထပ်မံပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်ပါ့မယ် . . . .”
“ဒါဆိုရင် ငါ့မျက်ဝန်းထဲက နီလာ ၂လုံးရှိပါသေးတယ်.. . အမောင် နီလာမျက်လုံးတစ်လုံးကို ဖြုတ်ယူပြီးတော့ ဟိုလူငယ် ဆီပို့ပေးပါလိုက်ပါကွယ်… ”
“အို. . အရှင်မင်းသား သင့်မျက်လုံးများကို ကျွန်တော်မဖြုတ်ရက်ပါ.. ပျံလွှားငှက်ငယ်က ၀မ်းနည်းလှိုက်လှဲစွာ ပြောပြီး မျက်ရည်တွေရစ်ဝဲလာပါတယ် ”
“ပျံလွှားငှက်ရယ် ငါအမိန့်ပေးသလို ဆောင်ရွက်စမ်းပါကွယ်…. ” ဒါကြောင့်ပျံလွှားငှက်ငယ်ဟာ မင်းသားရဲ့မျက်လုံးကို ဖြုတ်ယူပြီးတော့ လူငယ်ရဲ့ အခန်းဆီသို့ ပျံသွားတယ်. လူငယ်က သူ့လက်ပေါ်မှာ ခေါင်းတင်ပြီး အိပ်ပျော်နေတဲ့ အတွက် ငှက်ငယ်ရဲ့ အတောင်ပံရိုက်ခတ်သံကို မကြားရဘူးပေါ.. သူ့မျက်လုံးတွေ ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ စားပွဲပေါ်က တောက်ပနေတဲ့ နီလာလုံးကြီးကို တွေ့ရတာပေါ. .. “ငါ့ကို ချီးမွမ်းတဲ့ လူပေါ်လာ ပြီ သည်ကျောက်ကို ငါ့ကို ချီးမွမ်းတဲ့လူက ပေးလိုက်တာဖြစ်မှာပဲ. ငါ့ရဲ့ ပြဇာတကို ပြီးအောင် ဆက်ရေး နိုင်တော့မယ်လို့ပြောပြီး ” အိပ်ပျော်သွားတာပေါ..